Lungelelana | Indlela Onokuphumelela Ngayo Esikolweni
Umgudu nje omncinane ukuze ulungelelane unokukunceda kwiinkalo ezininzi—ube nexesha elingakumbi, unciphise uxinezeleko uze upase kakuhle.
MASITHI ubusiya kuthenga into ethile evenkileni, kodwa ufike izinto zithe saa yonke indawo. Bekuya kuthabath’ ixesha elingakanani ukuyifumana? Ngaba bekungayi kuba lula ukuyifumana xa yonk’ into ipakishwe ngendlela yaye ibhaliwe? Yiloo nto ke onokuyenza nakumsebenzi wakho wesikolo. Njani?
UZachary waseUnited States oneminyaka eli-18 ubudala uthi: “Ndakha ndalibala umsebenzi wesikolo ekwakumele ndiwenzele ekhaya—kuquka izinto endandimele ndizenze ekhaya—kuba ndandiza kuchitha impelaveki kwikhaya lomnye umhlobo wam. NgoMvulo kwafuneka ndicenge ootitshala bandiphe elinye ixesha. Ngoku ndizenzela ucwangciso oluza kundikhumbuza ngezinto endimele ndizenze.”
Oku kuzibhala phantsi izinto kwamnceda noCelestine, ibhinqa eliselula lasePapua New Guinea. Xa ecinga ngemihla yakhe esesesikolweni, uthi: “Ndandizenzela ucwangciso lwazo zonke izinto endimele ndizenze kuquka umsebenzi wesikolo endiza kuwenzela ekhaya, iimviwo kunye nolonwabo. Oku kwakundinceda ndenze izinto ezibalulekileyo ndize ndizigqibe kwangexesha.”
Icebiso: Zenzele ucwangciso lwezinto omele uzenze kwincwadi, okanye kwiselfowuni okanye kuso nasiphi na isixhobo se-elektroniki.
Abantu bathanda ukuthi, “ndiza kuyenza ngelinye ixesha.” Kubhetele ungaphozisi maseko xa kukho umsebenzi omele uwenze—ngakumbi owesikolo owenzelwa ekhaya.
Icebiso: Qiniseka ukuba umsebenzi wesikolo ukhwela kuwo ngoko nangoko xa ufika ekhaya, ngaphambi kokuba ubukele iTV okanye uye kudlala.
Lungisa izinto oza kuzifuna.
Ngaba wakha wathi ufika eklasini wabe ufumanisa ukuba kukho into oyilibeleyo kwiincwadi zakho? Ungakwazi ukuyiphepha le meko! Njani? UAung Myo Myat, umfana waseMyanmar uthi: “Ndisoloko ndiyipakisha kwangexesha ibhegi yam.”
Icebiso: Ibhegi ophatha ngayo iincwadi mayihlale ikwimeko efanelekileyo izinto zipakishwe kakuhle ukuze kube lula ukuzifumana.
Undoqo: Ukulungelelana kuya kukunceda ungabi nezinto ozilibalayo, ungashiywa lixesha nokuba ungaze ucinge ukuba unexesha elaneleyo lokwenza zonke izinto ezibalulekileyo.
Kutheni ungaqalisi kwangoku? Khawucinge ngenkalo enye omele ulungelelane kuyo. Emva koko cela umzali okanye umhlobo akucebise ngezinto onokuzenza ukuze uphucule.
Funda ngamacebiso endlela yokuyeka ukuzibekel’ amangomso izinto!
Ngaba ucinga ukuba unomsebenzi omninzi? Yintoni eza kukunceda?
Indlela Onokuphumelela Ngayo Esikolweni—Lungelelana